/blog/Gallery/Wax kasta oo ku saabsan Oxandrolone (Anavar), waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Posted on 10 / 26 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Waa maxay Oxandrolone (Anavar)?
Oxandrolone (53-39-4), oo leh budada Anavar sida magaceeda loo yaqaan, waa daawo isku-darka androgen iyo anabolic steroid (AAS) oo aad caan ugu ah xooggeeda iyo awoodeeda-xoojinta. Waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee loo adeegsado steroids anabolic steroids. Cudurka Anabolic wuxuu macnaheedu yahay inuu xoojinayo borotiinka unugyada, sidaas darteedna horseed u ah kordhinta muruqyada degdega ah iyo lafaha adag.
Ahaanshaha anatoor testosterone (iskuxirankiisu wuxuu la mid yahay kan testosterone), Anavar waxay ku shaqeysaa soo-dhoweeyeyaasha nukliyeerka gaar ahaana waxay ku xidhaa sida habka testosterone u sameyso. Sidaas darteed, waxay ku anfici kartaa daaweynta testosterone bedelka.
Oxandrolone (Anavar) budada (53-39-4) waa amaan in loo isticmaalo ragga iyo dumarka labadaba markii qiyaasta saxda ah la raaco. Ka sii darane, waxyeelada suurtagalka ah ee suurtogalka ah badanaa waa mid khafiif ah. Sidaas oo kale, waa mid ka mid ah xalalka u raadinta dadka qaba HIV-luminta syndrome ama hypogonadismka ragga maxaa yeelay waxay wanaajineysaa xajinta nitrogen iyo sidoo kale murqaha dufanka badan.
Haddii aad raadineyso daawada steroid ah ee ugu khafiifka ah laakiin soonka anabolic ee ragga ama naagta, uma badna inaad qaldantaan budada Oxandrolone (53-39-4). Dadka qaarkiis, xitaa xitaa dib u eegista Anavar reddit, waxay ugu yeeraan "The Steroid Girl" maxaa yeelay waxay ka mid tahay dhowr steroids oo si wanaagsan ula dhaqma dumarka badankood.
Oxandrolone (Anavar) waxaa lagu sharxay markii ugu horreysay sanadka 1964 ee Searle Laboratories (oo hadda ah shirkad ka socota shirkadda Pfizer). Shirkaddu sidoo kale waxay soo saartaa dawooyin kale oo caan ah sida Celebrex, NutraSweet iyo Ambien. Waa curinta dadaalka iskaashiga ee Raphael Pappo iyo Christopher J. Jung.
Khubarada cilmi-baaristu waxay soo jiidatay saameynta androgenic ee aadka u daciifka ah ee Oxandrolone ee la xiriirta saameynta daawada anabolic-ka. Waxay markii dambe, 1964, ku soo bandhigeen daroogada sida a Daawooyinka dawooyinka loogu talagalay kor u qaadida muruqyada dadka ku dhaca miisaan lumis qasab iyo sidoo kale daaweynta HIV / AIDS.
Nasiib darrose, daroogada si xun ayey u isticmaaleen bodybuilders, taasna waxay dhalisay sumcad xumo. Natiijo ahaan, Shaybaarada Searle waxay joojisay 1989.
Dhawr sano ka dib, Shirkadda Biyo-teknoolojiyadda Guud ee Biyo-teknoolojiyadda (Bio-Technology General Corporation) waxay la wareegtay cilmi-baarista iyo horumarinta daroogada. Tijaabooyinka caafimaad ee ay shirkaddu ku sameysay daroogada ee 1995 waxay horseedaysaa sii deyntiisii ​​labaad, laakiin markaa ka hooseysa Oxandrin (magaca sumadda).
Waqtigaas, dawada anabolic steroid waxaa lagu iibiyay magacyo kala duwan oo magac ah, oo ay ku jiraan Bilowgii Oxandrolone iyo Oxandrin, adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaa markii dambe lagu daray magaca ay hadda caanka ku tahay Mareykanka, Anavar.
Waqti kadib, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) waxay u ogolaatay Oxandrolone xaalada daroogada agoonta sidii loogu daaweyn lahaa cudurka loo yaqaan "Turner Syndrome", miisaanka oo yaraada HIV iyo sidoo kale miisaanka oo yaraada HIV.
Isticmaalka Oxandrolone ee suuqa iyo suuqa dhulka hoostiisa labadaba
Oxandrolone waa qaali in la soo saaro oo waxaa jira qawaaniin adag oo la xiriira soosaarkooda, iibintiisa iyo isticmaalkiisa. Si looga gudbo caqabadahaas loona badbaadiyo qiimaha, waxaa jiray iibiyayaal badan oo ka ganacsadey soo saarista iyo iibinta daroogada dhulka hoostiisa ah.
Nasiib darrose, suuqa madow 'Oxandrolone' waxaa lagu soo saaray sheybaar hoosaad aan nadiif ahayn halkaas oo heerarka loo baahan yahay marar dhif ah la raaco. Sidaas awgeeda, aad ayey ugu adag tahay adeegsadayaasha inay ka helaan Anavar sharci ah suuqa madow ama sheybaarka dhulka hoostiisa. Ka sokow soo bandhigista natiijooyinka la rabay, daroogada noocan ah waxay u horseedi kartaa waxyeelo dhinaca xun.
Dhibaatada kale ee Anavar ee lagu iibiyo suuqa dhulka hoostiisa ayaa ah in lagu xadgudbi karo xitaa caruurta aan qaan gaarin sababtoo ah ma jiraan sharciyo xakamaynaya soo iibsigooda iyo isticmaalkooda.
Haddii aad rabto inaad hesho Anavar aamin ah oo aamin ah, hubi inaad sameyso Budada Oxandrolone iibsato kana yimid ganacsade shati haysta oo sharciyeysan. In kasta oo iibka 'Oxandrolone' ay ka iibinayaan kuwa iibiya noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo qaali ah marka loo eego kuwa suuqa madow, way mudan yihiin.
Waxaa laguu xaqiijinayaa inaad helaysid budada cayriin ee dhabta ah ama sheyga kama dambaysta ah sababta oo ah inta badan iibiyaasha noocan ahi halis uma gelinayaan inay lumiyaan liisankooda taas oo ay ugu wacan tahay iibinta sheyga aan sharciga ahayn. AASraw waa mid ka mid ah iibiyaasha ugu wanaagsan ee Oxandrolone dhabta ah.
Qiimaha 'oxandrolone' caadi ahaan waa sarreeyaa. Marka, haddii aad kala kulanto bixiye iibiya dawada qiimo dhimis 'qoto-dheer', raadso inaad ogaato haddii iibiyuhu uu rukhsad haysto oo uu si sharci ah ugu shaqeeyo si aad u hubiso inaadan ku soo afjarmin badeecad iibsi.
Anavar / Oxandrolone waa shey qaali ah oo waxsoosaarka lagu sameeyo, waxaana guud ahaan lagula taliyay in laga iibsado ganacsade kasta oo ku siinaya qiimo dhimis 'qoto dheer'. Waad baari kartaa Dib u eegista Anavar si loo ogaado haddii iibiyeha uu ku shaqeynayo gudaha qaab dhismeedka sharciga iyo haddii alaabooyinkooda ay yihiin kuwo asal ah. Faallooyinka Anavar sidoo kale waxay ku siin karaan fikrado ku saabsan meelaha ugu wanaagsan ee lagu iibsado dawada.
Xaaladda sharciga Oxandrolone ee Mareykanka iyo dalal kale
Gudaha Mareykanka, Sharciga Maandooriyaha La Xakameeyay wuxuu u kala saaraa Oxandrolone / Anavar, oo ka mid ah androgenic and steroid anabolic steroid ah oo ah maaddada loo yaqaan 'Jadwalka III. Taasi micnaheedu waa in qofku ku helo dhakhtar shatiyeysan iyo farmashiye.
Ciqaabta sharciga ah ee lagu soo oogay qofka haysashada mukhaadaraadka sharci darada leh jadwalka III, oo ay ka mid yihiin Anabolic steroids budada ee Oxandrolone ama Anavar kama dambaysta ah, waxay kuxirantahay shuruucda gaarka ah ee laxiriira dowlad.
Xaaladaha badankood, dambiilayaasha ayaa gadaal laga dhigaa oo la ganaaxaa. Sida ku xusan Sharciga Maandooriyaha La xakameeyo, qaar ka mid ah dambiyada la xiriira Oxandrolone waxaa ka mid ah helitaanka khiyaanooyinka khiyaanada daawada iyo haysashada daroogada iyada oo aan la haysan warqad dhakhtar la'aan ah.
Gudaha Boqortooyada Midowday, Oxandrolone waa mid ka mid ah walxaha la xakameeyo ee lagu qeexay Jadwalka IV; dhammaan steroidsyada anabolic-ka waxay ka tirsan yihiin qaybtaan.
Kanada dhexdeeda, shuruucda dalka ee ku saabsan Oxandrolone waxay la mid ahaayeen kuwii ka jiray Boqortooyada Midowday ilaa 1996 markii sharciga wax laga baddalay, marka laga reebo jadwalka IV. Sidaas awgeed, ma jirto hagitaan cad oo ku saabsan cawaaqibka sharciga ee dadka haysashada maandooriyaha, kuwa hadda haysta iyo kuwa danaynaya qaadashada.
Si kastaba ha noqotee, sharciga steroid ee Kanada ayaa leh qoraal qeexan oo sheegaya in qof ka mid ah waddanka gudihiisa uusan iibsan karin daroogada haddii aysan sharrax ka bixin sababta ay u doonayaan inay iibsadaan. Iyada oo ku xidhan sababta la siinayo, iibiyaha ayaa aqbali kara ama diidi kara dalabka iibsiga. Isku day ah in la iibsado steroid waa inuu raacaa ugu yaraan 30 maalmood kahor mid kale oo aan la samayn.
Vagueness ee Shuruucda daroogada ee Kanada, gaar ahaan illaa Oxandrolone, waxay u muuqataa inay si ula kac ah u dabacsan tahay si ay awood ugu siiso saraakiisheeda inay go'aan xor ah ka gaadhaan kiisaska meelaha jirdhiska laga helo iyagoo adeegsanaya steroid ujeedooyin madadaalo. Si kastaba ha noqotee, kiisaska intooda badan, dembiga ugu horreeya ee la xiriira Anavar wuxuu soo jiitaa ganaax aan ka badneyn $ 2000 iyo xabsi xabsi ah illaa bilood ee 18.
Xaaladda wax-soo-saarka Oxandrolone ee Shiinaha
Soosaarka steroids sida Oxandrolone waxaa si weyn loo xakamey dalal badan tanina waxay xadideyneysaa tirada soo saareyaasheeda.
Si kastaba ha noqotee, hawlwadeennada suuqa madow ee wadamo kala duwan, oo ay ku jiraan Maraykanka ayaa ka faa'ideysanaya sharci darrada sharciga ah ee lagu soo dejinayo alaabada ceeriin ee 'Oxandrolone' oo ay soo saaraan oo iibiyaan daroogada iyada oo aan la ogayn hay'adaha sharciyeynta ee ay khusayso.
Shiinaha ayaa leh tobanaan iibiyayaal idman oo budada cayriin ee Oxandrolone. Tani waxay ka dhigeysaa in sheyga uu noqdo mid laga heli karo waddanka marka loo eego kuwa iibsadayaasha jecel inay iibsadaan si ay uga sii shaqeeyaan. Nasiib darrose, qaar ka mid ah budada cayriin ee Oxandrolone ee laga soo dhoofiyo Shiinaha waa la diiday, taas oo horseedaysa soo-saarka iyo iibka is-ka-ganacsiga Oxandrolone adduunka oo dhan.
Maxaad ka filan kartaa Oxandrolone?
Inta ugu badan ee adeegsadayaasha Oxandrolone waxay qaataan steroid-ka si ay culeys ugu helaan koritaanka muruqyada. Tan waxaa badanaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo wanaaga dadka ay la kulmaan culeys xad dhaaf ah sababtoo ah caabuq ama qalliin.
Waxaa la yaab leh, korodhka miisaanka ee ka dhasha isticmaalka Anavar waa muruqyada jilicsan sababta oo ah hoormoonka ay dawadu bixiso ayaa macaan siinaynin. Sidaas oo kale, jirkaagu ma dareemi doono haynta biyaha xad-dhaafka ah iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka steroid-ka. Waxa kale oo yaab leh oo ku saabsan natiijooyinka daroogadaani waa in ay u fududahay adeegsadaha inuu ku sii hayo culayska ka dhalanaya.
In kasta oo daroogada laga yaabo in aysan soo bandhigin guulo sida ugu badan kuwa ka dhasha isticmaalka wakiilo kale oo caan ah sida Testosterone iyo Anadrol, waxay ku habboonaan doontaa shakhsiyaadka raadinaya guulo dhexdhexaad ah. Taasi waa sababta ay badanaa doorbidaan dumarka maxaa yeelay badidoodu waxay kaliya danaynayaan uun kordhinta muruqyada.
Haddii aad rabto Anavar ragga iyo in kale Anavar dumarka marka la helo waqtiyo badan inta lagu jiro xilliyada fasaxa ka baxsan, runti waad jeclaan doontaa dheef-shiid kiimikaadka sare ee Oxandrolone. Waxaad ogaan doontaa inay ka dhigeyso inaad hesho waxyar oo ka mid ah dufanka jidhka xilli-xilliyeedka marka la barbar dhigo markaad isticmaasho steroids kale oo xoog badan.
Anavar ragga ama Anavar ee dumarka waxay kuu noqon kartaa waxtar dheeri ah adiga inta lagu gudajiro wajiga goynta. Daroogadu si dabiici ah ayey u xoog badan tahay anabolic. Sidaas oo kale, waa mid wax ku ool u ah ilaalinta unugyada jilicsan marka qofku wax cunayo.
Markaad rabto inaad daadiso dufanka jidhka, qaadashada kaloorku waa inay ka hooseysaa xaddiga kaloori ee aad gubto si loo ilaaliyo unugyada jilicsan ee ugu badan. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo eegin tayada kaamilnimada ee cuntadaada, waxaad waayi doontaa muruqyada qaarkood haddii jirkaagu uusan lahayn awood culus oo ah sunta ka hortagga jirka. Iyadoo la tixgelinayo dhismaheeda anabolic ee xoogga leh, taasi waa meesha ay Anavar ku imaaneyso wax anfac leh.
Markaad isticmaasho Anavar inta lagu gudajiro wajiga goynta, jirkaagu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu sifiican u gubto dufan badan. Ugu dambayntiina, waxaad la kulmi doontaa fiicnaan xagga xididdada ah waxaadna u muuqan doontaa mid adkaysi badan oo aad qeexan tahay. Taasi waa sababta rag badani ay doortaan Anavar miisaan lumis.
Anavar ayaa ah doorka steroid ee la doorbido ee ciyaartooyda sababta oo ah awoodeeda xoojinta-xoojinta. Si kastaba ha noqotee, saameynteeda tan looma dhawaaqin sida tan steroids kale sida Halotestin ama Dianabol.
Awooda ciyaaraha fudud waxay ku dhacdaa xawaareheeda / awoodeeda, labaduba waxay saameyn toos ah ku leeyihiin waxqabadkiisa guud ee ciyaaraha. Awoodda ay u leeyihiin ciyaartooydu waa, sida ay u fiican yihiin wax qabadkooda.
Awoodda ka sokow, ciyaartooydu waa inay noqdaan kuwa fudud oo sidaas ah, ha dooneynin muruqyo badan oo la dhiso. Sababta oo ah waxay xoojisaa qofka iyada oo aan daruuri u kordhinayn muruqyadooda, Anavar waxay noqotaa mid sii kordhisa ciyaaraha fudud. Si ka sii wanaagsan, ma ahan mid horseedi kara biyo haynta, taas oo haddii kale caqabad ku noqon karta caqabad ku noqoshada ciyaaraha fudud.
Haddii aad u isticmaasho Anavar inaad u daadiso dufanka ama aad u hagaajiso waxqabadkaaga ciyaaraha, waxaad ogaan doontaa in marka aad u qaadatid daawada sida laguu sheegay, heerka soo kabashadaagu si weyn ayuu u fiicnaanayaa. Ka sokow, waxay xoojineysaa adkaynta murqahaaga.
Natiijo ahaan, waqti dheer ayaad qaadan doontaa ka hor inta aadan daalin markaad qabaneyso nashaadaadka jirka, sidaa darteed awooda aad u riixeyso si adag iyo inaad dheeraato. Tani waxay kaa caawineysaa inaad inbadan ka faa iideysato xiisadaha jirdhiskaaga.
Waa kuwaan waxyeelooyinka guud ee inta badan steroids caan ah. Aynu aragno haddii waxyeellooyinka loo yaqaan 'oxandrolone side effects' ay wax uun ku tahay iyaga.
Si ka duwan steroids qaar ka mid ah ayaa jecel Trenbolone in udgoonku udgoon yahay, oo markaa keenaya gynecomastia, hoormoonka ay soo saartey Oxandrolone ma keento wax saameyn taban ah oo estrogenic ah. Tani waa sababta oo ah ma keento haynta biyaha taas oo haddii kale kicinaysa heerarka estrogenka inay kor u kacaan. Hanti-ka-haynta biyaha aan lahayn-ka-dhigista waxay ka dhigeysaa isticmaale u nugul dhiigkarka.
Jiritaan la’aanta Oxandrolone ee keenta waxyeellooyinka estrogenic waxaa sidoo kale loo aaneeyaa xaqiiqda ah inaysan qabin waxqabad kasta oo la xidhiidha progesin-ka.
In kasta oo Oxandrolone uusan ahayn androgenic, haddana wuxuu keenaa waxqabad androgenic yar. Sidaas darteed, dadka adeegsada waxay u badan tahay inay yeeshaan cudurka finanka iyo kuwa aadka ugu nugul nabarrada madaxa labka waxay u badan tahay inay la kulmaan timo badan ka dib isticmaalka steroid-ka.
Anavar ee dumarka waxay soo saari kartaa saameyn androgenic oo laga yaabo inay kor u qaado astaamaha bikida sida koritaanka timaha jirka, qoto dheer ee codka iyo kintirka oo weyneeya dumarka. Si kastaba ha noqotee, astaamaha waxaa looga hortagi karaa adigoo si sax ah u socda Qiyaasta Anawar.
Haddii aad dumar tahay oo aad la kulanto astaamaha bikida, waxaa lagugula talinayaa inaad isla markiiba joojiso dawada. Markii aad taas sameysay, astaamaha waa inay baaba'aan. Haddii kale, astaamuhu waxay noqon karaan qayb adiga ka mid ah haddii aad iska ilowdo oo aad sii wadato steroid-ka.
Si kastaba ha noqotee, inta badan dadka isticmaala steroidka ayaan la kulmin saameynta androgenic-ka sababtoo ah dabeecada guud ee androgenic aad ayey u yar tahay.
Si ka duwan steroids-ka kale ee anabolic-ka ah ee u baahan in lala isticmaalo 5-alpha reductase inhibitors ee kan dambe si looga hortago waxyeelada suurtagalka ah ee androgenic, Anavar waa aamin iyo jilicsan xitaa iyada oo aan la xakameynin. Tani waa sababta oo ah 5-alpha reductase enzyme waxaa loogu tala galay in lagu yareeyo testosterone ilaa dihydrotestosterone, laakiin maadaama Oxandrolone ay horeyba u tahay dihydrotestosterone, uma baahna enzyme-ka.
Mid ka mid ah waxyeelooyinka ugu daran ee loo yaqaan 'oxandrolone side' waa wax laga sameeyo kolestarol. Hormoonka 'Oxandrolone' wuxuu xakameynayaa HDL kolestarol illaa 50% halka uu kor u qaadayo heerarka kolestaroolka LDL illaa 30%.
Isbeddeladaas kolestaroolka ah darteed, dadka leh arrimaha kolestaroolka waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan kordhinta isticmaalka 'oxandrolone'. Haddii kale, kuwa sida ugufiican ugu adeegsan kara isticmaalkiisa waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ilaashadaan qaab nololeed caafimaad leh iyagoo cunaya cunno ay ku habboon tahay kolestarool-ka leh heerarka dufanka badan iyo sameynta nashaadyo badan oo wadnaha ah.
Markaad isticmaaleyso dawadan, waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad yareyso dufanka buuxa iyo sokorta fudud. Waxaad ku dari kartaa kolestarol kahortaga antioxidant-ka si aad heerarkooda u ilaaliso.
Wax steroid ah oo aad qaadatid, oo ay ku jiraan Anavar, waxay joojisaa wax soo saarka dabiiciga ah ee testosterone ee jirkaaga. Si kastaba ha noqotee, xaddiga xakamaynta wuxuu ka duwan yahay steroid ka kale. Marka la barbardhigo steroidsyada kale ee hadda la iibinayo, Anavar waxay leedahay mid ka mid ah saameynta xakameynta ugu fudud. Waxay joojisaa guud ahaan heerarka serum-nus nuskeed.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo saameynta xakameynta testosterone dabiiciga ah ee Anvar uu yar yahay, ragga waxaa lagula talinayaa inay ka dhigaan testosterone exogenous qeyb ka mid ah waxyaabaha ay ku kordhinayaan. Haddii kale, hoormoonka loo yaqaan 'oxandrolone hormone' wuxuu sababi karaa xaalad la xiriirta testosterone oo hooseysa, oo ka mid ah calaamadaha kale ee dhibaatada leh.
Si kastaba ha noqotee, ragga qaarkood ma la kulmaan wax arrin la xiriira testosterone oo sabab u ah isticmaalka Anavar xitaa marka heerarkooda soo-saarka testosterone ay hoos u dhigayaan 50% by steroid. Tani waxay kuxiran tahay nin testosterone dabiici ah in kastoo. Si kastaba ha noqotee, ragga intooda badani waxay u baahan doonaan daaweyn testosterone exogenous si ay u yareeyaan astaamaha suurtogalka ah sababtoo ah isticmaalka steroid.
Nasiib wanaag, sida steroidka kale ee anabolic steroid, saamaynta testosterone ee xun ee Anavar waxay bilaabi doontaa inay baaba'aan marka qofku joojiyo qaadashada. Laakiin soo kabsashada oo buuxa waxay qaadan doontaa waqti inay dhacdo taasina waa qorshaha daaweynta wareegga post-ga (PCT) waxaana lagula talinayaa in la dhammaystiro muddada daawada loo qaato. PCT waxay dardar gelineysaa howlaha soo kabashada.
Anavar waa C17-aa Steroid anabolic iyo sidaa darteed, waxay u horseedi kartaa waxyeelo beerka, in kasta oo aan si toos ah. Isticmaalka joogtada ah ee steroid-ka wuxuu dhalin karaa koror weyn oo ku yimaada qiyamka enzyme beerka. Fayraska beerka ee kordhay wuxuu culeyska saaraa beerka, isagoo kordhinaya khataraha waxyeelada leh.
Marka, aawadood caafimaadka beerkaaga, waxaa muhiim ah in laga fogaado adeegsiga steroid C17-aa anabolic steroid, oo ay kujirto Anavar haddii ay dhacdo inaad wax dhibaato ah oo xagga beerka ah ah. Sidoo kale, ha cabbin khamri aad u badan markii aad ku dareyso daawada loo yaqaan 'C17-aa anabolic steroid' sida Anavar si aad uga fogaato inuu buro beerkaaga.
Nadiifiyaha beerka ee qorshaha kabiddaada inta aad isticmaaleyso Oxandrolone waxay ubaahan doontaa wado dheer si loo joogteeyo caafimaadka beerkaaga. Iyo maadaama isticmaalka isteeroydhiska loo yaqaan steroid ay sababi karto waxyeelo beerka, waxaa muhiim ah inaad xaddido muddada kordhinta Anavar ugu badnaan toddobaadyada 8.
In kasta oo Oxandrolone uu ku habboon yahay ragga, wareegga Anavar waa mid u jilicsan ragga marka loo eego inta ugu badan ee ragga adeegsada waxay u arkaan wax aan waxtar u laheyn baahiyahooda soo koraya, gaar ahaan xilliyada fasaxa ka baxsan ama xilliyada koritaanka. Si kastaba ha noqotee, wali waa ay ku dhegan yihiin dhowrista muruqyadooda caatada ah, taas oo ah ujeedooyinka ugu waaweyn ee adeegsadayaasha badankood. Si ka sii wanaagsanba, dawadu waxay wanaajisaa waxqabadka dheef-shiid kiimikaadka qofka.
Wareegga Anavar ee haweenka
In kasta oo hoormoonka Oxandrolone uusan ahayn mid loogu talagalay xoojinta ballaaran, maahan wax aan caadi aheyn in isticmaale dheddig ah inay la kulanto 100% macaashka unugyada jilicsan markay isticmaalayaan. Sida oo kale, iyo xaqiiqda in ay tahay steroid aad u fiican-loo dulqaatay oo ay tahay go-aan in loo doorto haweenka ciyaaraha fudud oo leh firfircooni aad u sareysa.
Haweenka adeegsadayaasha Oxandrolone ee cunaya iyo wejiyada koritaanka ayaa si weyn uga faa'iideysta daroogada sababtoo ah waxay taageertaa noocyo fara badan oo jirka ah oo ay ku jiraan jir dhiska, tirada iyo jiritaanka boodhka caatada.
Halbeegga Anavar ee caadiga ah ee haweenka ayaa inta badan ku jira10mg ilaa 20mg ee daawada maalin kasta waana caadi ahaan lix toddobaad usbuuc. In kasta oo wareegyada qaar ay dhaafeen 20mg, xad-dhaafka ma ahan mid lama huraan ah oo wuxuu u horseedi karaa waxyeelo dhanka oxandrolone ah.
Xaaladda haddii aad tahay qof dumar ah oo aad rabto inaad isticmaasho steroidka muddo ka badan lix toddobaad, waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo oo aad ku dhaqaaqdo toddobaad usbuuc 3 illaa 4 ka hor intaadan bilaabin koorsada toddobaad ee 6.
Wareegga Anavar ee ragga
Inta badan ragga isticmaala ayaa adeegsada Anavar ee miisaanka oo yaraada gaar ahaan markay marayaan nidaamka goynta / weelka cuntada. Waxay u helaan 50mg ee daawada maalin kasta sida ku habboon bilawga qiyaasta Anavar. Si kastaba ha noqotee, sida lab ahaan, waxaad u istcimaali kartaa ilaa 80mg maalin kasta sida xadkaas u dhexeysa, daroogada ayaa amaan u ah jirkaaga.
ka fiirsaneysa Qiimaha Oxandrolone waa ugu yaraan $ 2 halkii tegis ah '10mg tab', wareegga Anavar ee ragga ayaa noqon kara mid qaali ah.
Qiyaasta saxda Anavar waxay ku kala duwantahay hal qof qof kale; waxay kuxirantahay lab / dhedig iyo waliba himilooyinkiisa madax banaan.
Guud ahaan, haweeneydu waxay u baahan doontaa qiyaasta Oxandrolone oo ka hooseysa nin si ay u gaarto natiijooyinka / faa'iidooyinka isku midka ah. Caadi ahaan, goynta Anavar wareejinta ee haweeneydu waxay ku jirtaa xaddiga 10mg maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta maalinlaha ah waxay u bixi kartaa sida sare ee '20mg' iyo in kasta oo ay kicin karto natiijooyinka la doonayo, qiyaasta sare ee steroid-ka ayaa ka dhigi kara haweeney inay soo saarto calaamadaha wacyigelinta.
Ciyaartooy lab ah oo xiisaynaya soo jiidashada qiyaasta Anavar ee 80mg maalin kasta ayaa noqon doonta tan ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, qiyaas yar waa la qaadan karaa laakiin waa inuusan ka yarayn 30mg, haddii kale ma noqon doonto mid si ku qanac ah wax ku ool ah.
Sida laga soo xigtay cilmi baaris iyo waxyaabo kala duwan Anavar Reddit dib u eegista, qiyaasta caadiga ah ee Anavar ragga waa 50mg maalin kasta.
Sida loo naaso Oxandrolone
Powder: halkii xNUMX gram ee Oxandrolone
Feejignaanta ugu sareysa ayaa la soo saaray: 20 mg / ml
1 gram ee budada Oxandrolone
Qalabka wax lagu cabiro ee loo yaqaan '1 beaker' kaasoo ku habboon la-waafajinta mugga cabitaannada
8 ml oo ah PEG 300
2 ml oo ah 190 Proof Grain Alcohol
Halkee laga iibsadaa Oxandrolone
Meesha kaliya ee aad ka iibsan karto Anavar-tayo sare iyo tayo sare leh waa iibiyaha liisanka leh oo sharciyeysan. Qoraalkaas, AASraw ayaa ah meesha ugu wanaagsan ee laga soo saari karo sheyga.
AASraw waxay la macaamilaysaa isugeyn ballaaran iyo soosaarid Oxandrolone sidaa darteed waxaan ku siin karnaa tiro kasta oo Anavar iibinta ama dhamaadka adeegsiga illaa iyo inta aad ka soo baxdo shuruudaha lagama maarmaanka ah. Waxaan ku shaqeynaa CGMP nidaamkayaga kantaroolka tayada leh ee la socon karo wuxuu naga caawinayaa inaan ku shaqeyno gudaha xududaha sharciyada iyo qaanuunada la xiriira si aan u hubinno inaan bixinno alaabo heer sare ah.
Sharaxaadda Meta: Oxandrolone (Anavar) waa daawo isku-darka androgen iyo anabolic steroid (AAS) oo aad caan ugu ah xooggeeda iyo awoodeeda-xoojinta. Waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee loo adeegsado steroids anabolic steroids. Oxandrolone ayaa amaan u leh isticmaalka ragga iyo dumarka labadaba marka qiyaasta saxda ah la raaco.
Demling RH, DeSanti L: Oxandrolone oo ay kasbatay macaashka dufanka leh inta lagu jiro soo kabashada gubashada daran ayaa la ilaaliyaa ka dib joojinta steroidka anabolic. Gubasho. 2003 Dec; 29 (8): 793-7. [PMID: 14636753]
John Cabaj, "Habka loo adeegsado iskuxirka oxandrolone." Patent US US20030032817, ayaa soo saaray Febraayo 13, 2003
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Cudurka Oxandrolone iyo dheef-shiid kiimikaadka ragga. Clinical Pharmacology & therappeutics, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). Oxandrolone iyo hormoonka koritaanka bini-aadamka: isbarbar dhiga saamaynta kobcinta ee carruurta gaaban. Joornaalka Mareykanka ee Cudurada Caruurta, 126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973). Oxandrolone ee koritaanka koritaanka cudurka Turner syndrome. Joornaalka Mareykanka ee Cudurada Caruurta, 125 (3), 385-387.
Strauss, RH, Liggett, MT, & Lanese, RR (1985). Isticmaalka dawooyinka 'anabolic steroid' iyo saameynta la ogaaday ee toban ciyaartooy haween ah oo miisaan culus leh. Jaamac, 253 (19), 2871-2873.
Tilmaanta Iibsashada oo Dhammeystiran 2019 ee loogu talagalay SARM SR9009 Joogtada Dhismaha	Sidee bay Flibanserin u Caawisaa Haweeney sida Hormoonka Jinsiga